Blog Reader: [ခပ်ရင့်ရင့် အတွေး သံစဉ်များ] 25 New Entries: အချစ်နဲ့ လူ တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်း
[ခပ်ရင့်ရင့် အတွေး သံစဉ်များ] 25 New Entries: အချစ်နဲ့ လူ တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်း
အချစ်နဲ့ လူ တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်း
ပြောင်းလဲမှုကို မြတ်နိုးတဲ့ "ကောင်" တဲ့ ……။
နှိုးစက် နာရီက ချောက်ချက်မြည်မှ
အားလုံး အိမ်ကို ပြန်လာချိန်မှ
ပြန့်ကျဲနေတဲ့ သံစဉ်တွေကို လိုက်ကောက်နေရ။
ပြောင်းလဲမှုကို မြတ်နိုးတဲ့ "ကောင်" တဲ့ …..။
ရာစု အဟောင်းက လူမသိ သူမသိ
ရင်ထဲက ဆူးကို စိုက်ပျိုးဖို့
ပုစ္ဆာဟောင်း တစ်ပုဒ်ကို တွက်ရင်း
ပုံသေနည်းတကျ "အချစ်" သစ်ပင် စိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်း
မင်း ရဲ့  အသံ နေရာအနှံ့
တွေးရင်း ကြွေကျ မျက်ဝန်းတစ်စုံမှ
မှုံဝါးဝါး မှန်တစ်ချပ် ဘောင်ခတ်ခြင်းမပါဘဲ
တ၀ဲဝဲလည်နေတဲ့ မင်း ပုံရိပ်က
မိုးဒေ၀ါကလည်း လျှို့ ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာ
ငါ့ညတွေကို ပိန်းပိတ်အောင် အရောင်ခြယ်နေပြန်ပြီ။
သိမ်ငယ်စွာနဲ့ အရုဏ်ကို ဖိတ်ခေါ် ပြန်လည်း
ပိုးစုန်းကြူးဘ၀ ငါ... ဖြစ်ရပြန်ပြီ။
ယိုင်နဲ့နဲ့ ငါလည်း အားကျမခံ ရုန်းထ
ရော့ .....အချစ်.... ဒါ....
source & idea : flickr, bravejournal
မနှစ်က ဒီလိုအချိန်ကို ငါပြန်မြင်မိ...။
ဘလော့တခုပိုင်ရုံနဲ့ ဘလော့ဂါလို့ ပြောချင်လဲ ပြောပေါ့...
အနုပညာဆိုတာ ဖန်တီးသူရဲ့ နှလုံးသွေးစုတ်ချက် .....
ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းဆိုတာ ဖန်တီးသူရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူး...
ကျွန်တော့်တို့ စုတ်ချက်တွေ ၀ိဥာဉ်ရှိသ၍ ခြယ်မှုန်းနေကြအုံးမှာပါပဲ....
စကားလုံးပန်းချီတွေ ဟောဒီ့ရှေ့မှာ သွန်မှောက်ချပြနေအုံးမှာပါပဲ...
တခါတရံ ကာရံညီချင်ညီမယ်...၊ တခါတရံ သံစဉ်မဲ့နေမယ်..
တခါတရံလဲ ထော်လော်ကန့်လန့် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်....
အားပေးသူရှိချင်ရှိမယ်....၊ ရှိချင်မှလဲ ရှိမယ်.....
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ဘလော့တခု ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်....
ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂါ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်.....
Breath-Taking photo shots of Bagan.
မနမ်း ဝံ့ ပါဘူး။
ဘယ်သောင်ပြင် ကပ်ရမယ် မသိ
နင် ရက်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပေမယ့်
ငါ ဝတ်ဆင်နေရတဲ့ အကြွေရက်တွေထဲ
ငါ့ အရိုးခံစိတ်နဲ့ တူးဖေါ်ထားတဲ့
စမ်းချောင်းလေး လူလားမြောက်ခွင့် ရခဲ့ပါပြီ…
Happy Birthday Naruto and Ko Zeyar!
Happy 29th Birthday for Naruto and 26th birthday for Ko Zeyar
May you two be healthy and long life from now on!
May you two be happy in your lifes with the ones you love!
May you two be fufill with the wiasjes you want!
With the best of best wishes!
ဟား……. ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်လိုက်စမ်း….. ပြာ…. နေတာပဲ….။
ဘေးပတ်လည်မှာလည်း မျက်စေ့တစ်ဆုံး မြက်ခင်းပြင်ကြီး…။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖြေလျော့ပြီး
ပက်လက်လှန်ပြီး ကြည့်လိုက်စမ်း…။ ဘယ်လောက် အေးချမ်းသွားလဲ…။
တိမ်တွေကို တစ်ခုချင်း လိုက်ကြည့်…။ ဖြေး…..ဖြေးလေး ရွေ့နေတာ…။
အပူအပင်တွေ ဘာ…. မှ မတွေးနဲ့။ ကံကောင်းရင် သက်တန့် လေးတွေပါ တွေ့ရတတ်တယ်…။
အားရင် အားသလို မြက်ခင်းပေါ်မှာ လှဲပြီး တိမ်တွေကို
ကြည့်နေရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ကျောင်းစာလား….။ လုပ်မနေနဲ့ အချိန်တန်ရင်
အောင်သွားလိမ့်မယ်….။ ဘွဲ့ရရင် ခေါင်းမသုံးရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလုပ်။ အလုပ်မှာ ပြတင်းပေါက်
ကျယ်ကျယ်ရှိရင် ပိုကောင်းတယ်…။ တိမ်တွေကို ကြည့်လို့ရတာပေါ့။
စည်းစိမ်တွေ… ရည်မှန်းချက်တွေ… ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ…. ဘာ….မှ
မလိုဘူး…။ ဘ၀မှာ ဘာများထူးပြီး အဓိပ္ပါယ် ရှိမှာလဲ…။ အချိန်တန်ရင် သူ့ဟာသူ
အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်…။ အခု ဒီလိုနေ….. နေတာကိုက စည်းစိမ် မဟုတ်လား…။
အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ မိန်းမတစ်ယောက်လောက် ယူအုံးမှပါ။ သိပ်ချော
သိပ်လှ သိပ်ထက်မြက်စရာ မလိုဘူး။ တော်ရုံသင့်ရုံဆို ရပြီ။ သာမာန် အိမ်ရှင်မ ဆို
ရပြီ…။ ကလေးလား…။ သုံးယောက်လောက်တော့ ယူမယ်…။ အားတဲ့အချိန် မြက်ခင်းပေါ်လာပြီး….
တိမ်တွေရွေ့…. နေတာ ကြည့်မယ်…။ ဟား…. လောကကြီးက အေးချမ်းလိုက်တာ…။
အသက်ကြီးလာရင် စောစော ပင်စင်ယူပြီး ကလေးတွေလုပ်ကျွေးတာ
ထိုင်စားမယ်…။ အချိန်ပိုတွေမှာ… မြက်ခင်းပေါ်လာပြီး အေးအေးဆေးဆေး တိမ်ကြည့်မယ်…။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းရင်း အသက်ကြီးမယ်…။
ဟား…. သာယာလိုက်တာ… ကောင်းကင်ကြီးက… ပြာ… နေတာပဲ…။
Comapny Workers and Their Expected Salary!
ကလိုစေးထူး Said: မျှော်မှန်းလစာ ဆိုတာကို တွေ့ဖူးနေ၊ ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပြီ။ သိချင်တာက အဲဒီလိုမျိုး အလုပ်လျှောက်သူက သူ့မျှော်မှန်းလစာကို တင်ပြတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေကို မူတည်ပြီးတော့ လစာကို ပြန်သတ်မှတ်လဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုကြပါစို့၊ လူတယောက်က သိပ်တော်ပေမယ့် တောင်းတဲ့ လစာက သိပ်နည်းနေရင်ရော `ဒါတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး´ ဆိုပြီး သူ့ပညာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လစာမျိုး တိုးပေးတာမျိုး၊ ပြီးတော့ မတန်တဆ လစာတောင်းတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အခါမှာရော လစာကို ဘယ်လိုပြန်ညှိယူသလဲဆိုတာ ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိချင်ပါတယ်။ ညီမ အချိန်ရရင် ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ အဲ…၊ ရေးဖြစ်ရင်လည်း လက်လာတို့ပါအုံး။ :D
မျှော်မှန်းလစာ ဆိုတာကို တွေ့ဖူးနေ၊ ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပြီ။ သိချင်တာက အဲဒီလိုမျိုး အလုပ်လျှောက်သူက သူ့မျှော်မှန်းလစာကို တင်ပြတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေကို မူတည်ပြီးတော့ လစာကို ပြန်သတ်မှတ်လဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုကြပါစို့၊ လူတယောက်က သိပ်တော်ပေမယ့် တောင်းတဲ့ လစာက သိပ်နည်းနေရင်ရော `ဒါတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး´ ဆိုပြီး သူ့ပညာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လစာမျိုး တိုးပေးတာမျိုး၊ ပြီးတော့ မတန်တဆ လစာတောင်းတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အခါမှာရော လစာကို ဘယ်လိုပြန်ညှိယူသလဲဆိုတာ ကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သိချင်ပါတယ်။ ညီမ အချိန်ရရင် ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ အဲ…၊ ရေးဖြစ်ရင်လည်း လက်လာတို့ပါအုံး။ :D
ဒီနေရာမှာ ကျွန်မကြားဖြတ် ပြောချင်ပါတယ်။ ပိုစ့်လည်း ရှည်နေပြီထင်တယ်။ သည်းခံဖတ်ပါနော်။ ကျွန်မကတော့ အလုပ်တစ်ခုက ထွက်လာပြီးရင် ကိုယ်ထွက်လာတဲ့ အလုပ်နဲ့ ပုံစံတူ နေရာတစ်ခုမှာ ၀င်မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Information တွေက တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပေါက်ကြားမှာ စိုးလို့ပါ။ ဥပမာ.. Blazon ကနေ အလုပ်ထွက်ပြီ. စိန်ဂေဟာမှာ အလုပ်ဝင်တယ် ဆိုပါစို့.. Blazon မှာ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးဆို ဘယ်လိုပွဲမျိုးတွေ လုပ်နေကျလဲ.. သူတို့ကတော့ မေးမှာပါပဲ... ကိုယ်ကလည်း သိနေတော့ ပြောပြမိမှာပါပဲ.. အဲတော့ အလုပ်ထွက်လာတယ် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်က အဲမှာ ရှိနေတုန်းက သူများပေးတဲ့ လစာကို ယူပြီး လုပ်လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတင်းတွေကို အလဟသ ပေးမိတာမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ရတာလို့ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ဒါဟာ စောင့်ထိန်းသင့်တဲ့ Ethic တစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်ရှင်။ ပုံစံတူ မဟုတ်ဘူး. ကိုယ်လုပ်လာတဲ့ အလုပ်နဲ့ Nature ချင်းတူးတဲ့ Trading Company စတဲ့ နေရာ တစ်ခုခုမှာဆိုရင်တော့ အိုကေပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လစာ ကောင်းကောင်းလိုချင်ရင် ကိုယ်လျှောက်မယ့် ကုမ္ပဏီက ဘယ်လိုအရည်အချင်းမျိုးရှိရင်၊ ဘယ်လို ဘွဲ့မျိုးရှိရင် ကြိုက်တတ်လဲ ဆိုတာကို သိထားရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Blazon တို့၊ စက်မှု (1) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းရဲ့သား လုပ်တဲ့ အောင်ရီဖြိုး ကုမ္ပဏီတို့ ဆိုရင် MBA ဘွဲ့ရတွေကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အဲတော့ အတွေ့အကြုံ ရှိရှိ၊ မရှိရှိ MBA တွေကို လစာ ကောင်းကောင်း ပေးပြီး ခေါ်ပါတယ်။ (အလုပ်ထွက်တာတောင် မကြာသေးဘူး.. ရွှေထက်တို့ ကောင်းကောင်းဖွနေပြီ အဟိ...) အဲတော့ ကိုယ်လျှောက်မယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ အရည်အချင်း ကိုက်လား မကိုက်လား၊ သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတာ ကိုက်လား မကိုက်လား ဆိုတာကို အရင်သိထားရင်လည်း ကောင်းပါတယ်ရှင်။ တစ်ချို့ကုမ္ပဏီတွေဆို အင်တာဗျူးဝင်ရင် စီဗီတောင် မကြည့်ဘူး Certificate တွေ ဘာတွေပါလဲ အရင်ပြပါ ဆိုတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့လိုချင်တာ အရည်အချင်းလား၊ လက်မှတ်တွေလားတော့ မသိဘူးပေါ့နော်။ တစ်ကယ်တမ်းကြတော့ မြန်မာပြည်မှာ လက်မှတ်သာရှိပြီး ပညာမရှိတဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ။ အဲတော့ ကျွန်မ ပြောချင်ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်ကောင်းကောင်းရချင်ရင် တစ်ခါ တစ်လေမှာ အရည်အချင်းထက် လက်မှတ်တွေက အရေးကြီးတယ်ရှင့်။ :P
Basic Salary.... 300,000
Requirements..... At least3yrs experiences in Rlated Field, Good English, Good Knowledge of Computer, Internet and Email, Master Degree Holder (MBA, MPA, ME.. etc.. in accordance with the work)
Basic Salary...... 150, 000
Basic Salary.... 70,000 to 100,000
Basic Salary...... 150, 000 to 200, 000
Basic Salary....... 50000 to 70000
Basic Salary..... 35000 to 50000
To Nay phone Latt.....!!
ဘလော့ဂ်ဂါမောင်နှမတွေအကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ စနောက်ကြရင်း "မြို့စားကြီးနေဘုန်းလတ်" လို့ နာမည်တွင်ခဲ့တဲ့သူ။ မနှစ်က ဒီလိုနေ့မှာပဲ "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်" ဘလော့ဂ်လေးကို သူကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ တော့ တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သွားပြီပေါ့။ မှတ်မှတ်ရရ သူ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပထမဆုံးတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်နာမည်ကလည်း "လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်"တဲ့။ လက်တွေ့ဘဝမှာ သူလွတ်ကျခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဒါမှမဟုတ် အနုပညာသမားဆိုတဲ့ အမည်နာမတွေအတွက် သူ့ ဘလော့ဂ်ဟာ သစ္စာရှိတဲ့ လူယုံ၊ အစွမ်းထက်တဲ့ လက်နက်၊အရိပ်ကောင်းတဲ့ ညောင်သစ်ပင်လို အသုံးတော်ခံခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း ၃၆၅ရက်အတွင်းမှာ သူ့ မြို့တော်က စာကောင်းစာသန့် ၁၂၂ ပုဒ်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီစာတွေကြောင့် ဖတ်သူတွေအတွက် သုတပန်းတွေလန်းလာခဲ့တယ် ၊ ရသလမ်းတွေ ဆန်းလာခဲ့တယ် ၊ ပညာမီးတွေ လင်းပလာခဲ့တယ် ။သူကတော့ သတိထားမိချင်မှ ထားမိလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ သူ့ ရင်နဲ့ တည်ထားတဲ့ မြို့တော်ကြီး တစ်နှစ်ပြည့်တယ်။ ခုလိုအချိန်မှာ သူသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ဘလော့ဂ်အတွက် အထိမ်းအမှတ်ပို့စ်တင်မယ့် အစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ … ဘယ်မှာလဲ ။ သူရေးမယ့် ပို့စ်မှာ Comment ရေးဖို့ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းက သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်တကြီးစောင့်နေကြတယ်။ " မြို့စားကြီး " လို့ စနောက်ကြဖို့ စောင့်နေကြတယ် …ဇန်နဝါရီ ၂၉ ကတည်းက ခြောက်သွေ့နေခဲ့ရတဲ့ သူ့ မြို့တော်မှာ အပြုံးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေစေချင်တာ … ရယ်သံတွေနဲ့ စည်ညံနေစေချင်တာ … ဒါတွေအတွက်အားလုံးက စောင့်မျှော်နေဆဲပါ ..။ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကို ချစ်ကြည်စေချင်တဲ့ သူ့အတွက်၊ လူငယ်တွေကိုကောင်းစေချင်တဲ့ သူ့ အတွက်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ သူ့အတွက်ဘေးဒုက္ခဆိုတာ မြူတစ်မှုန်စာတောင် ကျရောက်မလာစေဖို့ ဘလောဂါ့ရပ်ဝန်းမှညီအကိုမောင်နှမအားလုံးက ဒီအမှတ်တရ ပို့စ်လေးနဲ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Who the hell is spreading the bad news?
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ သတင်းတွေ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခွင့် မရှိဘူး။ အမှန်တရားကို သိချင်ရင် နိုင်ငံခြား မီဒီယာတွေကို အားကိုးရတယ်။ မနေ့က ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စဟာ ကျွန်မတို့တွေ အတွက်တော့ တုန်လှုပ်စရာ အကြောင်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် ဘယ်သူကမှလည်း လိုက်လံဖြေရှင်းပေးလို့ မရသလို ကျွန်မတို့လည်း ဘာမှဖြေရှင်းပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုနေဘုန်းလတ် မဖမ်းခံရလား မခံရလားဆိုတာ ကျွန်မတို့လည်း သေချာ မသိပါဘူး။ သူ့အိမ်ကို ရဲတွေ ၀ိုင်းထားတယ်ဆိုတာလည်း လူတွေရဲ့ ချဲ့ကား ပြောဆိုခြင်း မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် လူတွေဟာ သတင်းတွေကို လက်လွတ် စပယ်ဖြန့်နေရတာလည်း။ သာမန်လူတွေအတွက်တော့ ဘာမှ မပြောပလောက်ပေမယ့် တစ်ခုသော နာမည်ကြီး မီဒီယာ တစ်ခုမှာ ဘာမှ မရေရာ မသေချာသေးတဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ သတင်းကို လုံးဝ သေချာနေသလိုမျိုး ရေးထားတယ်။ အချိန်နဲ့ နေရာကအစ မမှန်ပဲ သေသေချာချာကို ရေးထားတယ်။ ထားပါတော့ ဒီကိစ္စရဲ့ သတင်းတွေကလည်း ပြန့်နေတာကို။ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတက်လာတယ်။ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဘလောဂ့်ဂါတွေတောင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်တဲ့။ ဒီဘက်က အခြေအနေကို သေချာ မသိပဲ ဘာကြောင့် အဲလို ရမ်းလုပ်တာလည်းတော့ ကျွန်မလည်း မသိပါဘူး။ ဒီဘက်မှာ အားလုံး အိုကေပါတယ်။ ဘယ်သူကမှလည်း ထွက်ပြေးမနေသလို၊ ကျွန်မတို့တွေဟာ ဘာမှလည်း မဟုတ်တာ လုပ်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အားလုံးဟာ လွတ်လပ်စွာ blogging လုပ်နေကြတာပါ။ ဂျီတော့မှာလည်း 10 ယောက်အထက်သော လာမေးသူတွေကို လက်မလည်အောင် ဖြေရှင်းရတယ်။ စိတ်ပိန်တယ် ဆိုတာကလွဲရင် ဘာမှ ပြောစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ မသေချာ မရေရာတဲ့ သတင်းတွေကို ဘယ်သူက ဖြန့်နေတာလဲ။ မသေချာ မရေရာတဲ့ သတင်းတွေကို ဘာကြောင့်ရော တင်ပေးနေရတာလဲ။
Me and My Names!
တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း ဘလောဂ့်ရေးရတာ စိတ်ပျက်စရာ တော့ကောင်းသားရှင်။ တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေးစရာ အကြောင်းလေးတွေကို ရှာဖွေရတာ ပြောပါတယ်။ ခုလည်း ဘာရယ် ညာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်မကို ဘလောဂ့်ဂါတော်တော်များများက ပင့်ကူလေး ပင့်ကူလေး ခေါ်ခေါ်နေတော့ ကျွန်မရဲ့ တစ်ကယ့် နာမည်တွေရယ်၊ ကျွန်မကို နောက်ပြောင်ခေါ်တဲ့ နာမည်တွေရယ်ကို ပြန်တွေးကြည့်တာ ကျွန်မလည်း နာမည် တော်တော် များသားရှင့်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက တစ်ယောက် တစ်မျိုး ခေါ်ကြတဲ့ နမည်ကလည်း အများကြီးပဲလေ။ အဲဒီ နာမည်တွေများ မသိချင်ကြဘူးလားဟင် (စကား ခေါ်ကြည့်တာ ဟီး) တစ်ကယ်တော့ မသိချင်ဘူးပြောလည်း ရေးမှာပါပဲ။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ ခုချိန်ထိ အခေါ်ခံရတဲ့ နာမည်တွေကို ပြန်ပြောင်းတွေးကြည့် ရသော်………………
ကျွန်မက မွေးတုန်းက တော်တော် ချစ်စရာ ကောင်းတာရှင့်။ ၀၀ကစ်ကစ် ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေးလေးပေါ့။ ခုချိန်မှာတော့ ပိန်ပိန် ညိုညို ရုပ်ဆိုးဆိုးလေးပေါ့လေ။ အဖေကတော့ သူ့ရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကို သိပ်ချစ်လို့ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မကိုလည်း အဲဒီ အမကြီးရဲ့ နာမည် အတိုင်း ထက်ထက် လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက် အသက်ကလေးလဲ နည်းနည်း ကြီးလာတော့ အသက် တစ်နှစ် နှစ်နှစ် အရွယ်လောက်မှာ တော်တော် အကျင့်ပုတ်တယ် ဆိုပဲ။ လူတွေ လုပ်ကြံပြောကြတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးနော် တစ်ကယ် ပုတ်ရင်လည်း ပုတ်မှာပေါ့ (ဟိ) ။ အဲတော့ ကျွန်မကို နာမည်လေးများ လှလှလေး ပေးလိုက်ကြတာ အပုတ်လေး တဲ့ (အင့် ဟင့် ဟင့် တူများကိုနော်).. ဒါပေမယ့် ကျွန်မက ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော် ချစ်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောဖူးတယ် မဟုတ်လား။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ့။ အဲတော့ တစ်ချို့တွေက ခေါ်ကြတယ် အ၀ိုင်း တဲ့။ ကျွန်မ အဖေက ကျောင်းဆရာလေ။ အဖေတို့ကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဆို ကျွန်မကို ခေါ်တာများ လပြည့်ဝန်း တဲ့။ ခုချိန်ထိ ခေါ်တုန်းနော်။ သြော် ချစ်စရာ ကောင်းတာ မယုံကြဘူးပေါ့လေ။ မယုံရင် *ဒီမှာကြည့်လိုက်*။ ၀ိုင်းဝိုင်း ၀န်းဝန်းလေးကို တွေ့သွားရစေ့မယ်။
နောက် အဖေက ရွာတစ်ရွာမှာ အလယ်တန်းပြ ဆရာအနေနဲ့ တာဝန် ကျတုန်းကတော့ အဲဒီ ရွာက လူတွေက ခေါ်ကြတာက မလေး တဲ့။ ခုချိန်ထိ ခေါ်တာနော်။ သူတို့တွေက ချစ်စရာ ကောင်မလေးတွေကို မလေးလို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ်တဲ့။ နောက် ကျွန်မလည်း အသက်ကြီးလာ၊ 10 တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ် တက်တော့ တစ်ရက်လည်း ကျရော ကောင်လေး တစ်အုပ် အနောက်ကနေ လိုက်ပြီး နာမည်မေးတာ။ အမြင် ကပ်ကပ်နဲ့ ပြောထည့်လိုက်တာ စနိုး လို့။ ခေါ်လိုက်ကြသေးတယ် တစ်လလောက်။ အဲနာမည်ကိုလေ။ ပြီးတော့ ကျွန်မက မွေးရာပါ ပဲများတယ်ရှင့်။ ပဲများပြီး မွေးလာတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ပြောရရင် ကျွန်မ လမ်းလျှောက်တဲ့ ပုံစံကြောင့် တော်တော် များများက ပဲများတယ် ထင်ကြတာလေ။ Model တွေ catwalk လျှောက်သလိုပဲ (နောက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ မယုံရင် လိုက်မေးကြည့်ပါလား။ လိမ်ဖယ်ဖယ်လေး လျှောက်တာ) အဲတော့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း တစ်ချို့ ခေါ်ကြတာက ရွှေပဲ တဲ့။ ကျွန်မကလည်း ခေါ်တိုင်း အခေါ်ခံတဲ့သူ။ ဘယ်တော့မှ စိတ်မဆိုးဘူး။ ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် အေးဆေး။ ဈေးထဲမှာ ရွှေပဲသီးတွေ အော်ရောင်းတာတောင်မှ ကျွန်မ တစ်ခါ ကိုယ့်ကို ခေါ်တယ်ထင်ပြီး လိုက်မေးဖူးသေးတယ်။
နောက် Blazon မှာ အလုပ်ဝင်တော့ အဲဒီကလူတွေ ခေါ်ကြတာက ရွှေထက်။ အခု လူတော်တော် များများ ခေါ်တဲ့ နာမည်လေးပေါ့။ ကျွန်မလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ နာမည်ဘယ်သူလဲ မေးရင် ရွှေထက်ပဲ ပြောဖြစ်တာ များပါတယ်။ Planet မှာ ဖိုရမ် ၀င်ရေးတော့ နာမည်က လော်ရာ (Laura)။ ပလန်းနက်က သူငယ်ချင်းတွေဆို အပြင်မှာတွေ့လည်း လော်ရာပဲ။ နောက် မြန်မာတီးရှောပ့် ပေါ်လာတော့ နာမည်ပြောင်းရေးတယ် PinkGold။ သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်းဆိုတာ မှန်တယ်။ ဆိုင်မဆိုင်တော့ မသိဘူး။ အဲမှာတင် နာမည်က တော်တော် ပေါသွားတာ။ ကဒေါင်းညင်သာက စခေါ်တယ်။ ပန်းရွှေတဲ့။ နောက်တော့ ကိုတက်ဆလာတို့၊ စိန်မျောက်မျောက်တို့၊ ကိုထိုက် တို့ ခေါ်ကြပြန်တယ် ရွှေပန်း တဲ့ (ဆိုးတယ်နော)။ တစ်ချို့တွေက လာကြသေးတယ် ပန်းရောင်ရွှေတဲ့။ အဲ ဘလောဂ့်လည်း ရေးရော PinkGold ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပါပဲ။ တစ်ရက် စီမီနာ ကိစ္စ အစည်းအဝေးလေး တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုညီလင်းဆက်ကနေ စခေါ်လိုက်တာ ပင့်ကူတဲ့။ လူအဖြစ်ကနေ တိရစ္ဆာန်ဘ၀ကို လုံးလုံးရောက်တော့တာပဲ။ ခုချိန်ထိလည်း ဘလောဂ့်ဂါ တော်တော် များများက ပင့်ဂိုလ်းတောင် မခေါ်ကြတော့ဘူး။ ပင့်ကူလေး၊ မမပင့်ကူ စသဖြင့် ခေါ်ကြတာပေါ့နော်။
ကျွန်မက နာမည်သာ ပေါတာ မဟုတ်ဘူး။ ကာရံကလည်း ရှိသေးတယ်
အဲလို အဲလို ကျွန်မမှာ လူက မချမ်းသာ ပေမယ့်၊ နာမည်ကတော့ ပေါများ ချမ်းသာကြောင်း ပိုစ့်တင်ပြီး ကြွားလိုက်ရ ကြောင်းပါရှင်။ သြော် ကျွန်မရဲ့ နာမည်အရင်းကော သိကြလား။ မသိရင် ပြောပြမယ် တင်မြတ်ထက် တဲ့။ အဖေပေးတဲ့နာမည်။
"အွန်လိုင်းမှာ ချစ်ကြတာတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ လူနှစ်ယောက်ဟာ လူချင်း မတွေ့ပဲတောင် သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေနဲ့ သံယောဇဉ် နှောင်ဖွဲ့မိကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ချင်းဆက်သွယ် ချစ်မိသွားတာပဲလို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သိမြင်နားလည်လာတယ်။ ဒီလို နားလည်လာခြင်းဟာ ချစ်ခြင်းရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အရာပဲ မဟုတ်လားရှင်" -Mary Sammons
"ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ. နောက်ဆုံးမှာတော့ လူချင်းတွေ့ကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ" -Sandy
"နှစ်ယောက်သားသာ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီမှာ နေနေကြတယ်။ ဝေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နီးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အဲတော့ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို လွှမ်းမိုးတာမျိုး မရှိတော့ဘူး။ အပြင်လောကကြောင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ပျက်စရာ မျိုးတွေလည်း မကြုံရတော့ဘူး" -Charlene
" ကျွန်တော်တို့ စကားပြောရင်းနဲ့ပဲ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် အများကြီး သိလာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ လျှိုထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ရှိအုံးမှာပါပဲ။ အဲဒါတွေကတော့ နောက်ပိုင်း ဆက်ဆံရေးမှာ နည်းနည်းတော့ စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့" -SAK
"အွန်လိုင်းမှာ ချစ်ကြတာက ပိုပွင့်ပွင့် လင်းလင်းရှိတယ်၊ ပိုပြီးတော့ ရိုးရိုးသားသား ပြောလို့ရတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကို အားမနာတမ်း ပွင့်လင်းစွာ ပြောနိုင်တယ်" -Allison
" ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက် လေ့လာနိုင်တယ်ဗျာ။ လူချင်းတွေ့လို့ မပြောဖြစ်တဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကိုတောင် အွန်လိုင်းမှာ ရင်ဖွင့်လို့ သိပ်ကောင်းတယ်" -Rachel
"အွန်လိုင်း ဆက်ဆံရေးမှာ ကျွန်မ တွေ့ရတဲ့ အဓိက အားသာချက်ကတော့ communication skill တိုးတက်လာတာပဲရှင့်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို စကားလုံးတွေနဲ့ ဘယ်လို ဖော်ပြရမလဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိလာတယ်။ အပြင်မှာ ချိန်းတွေ့စရာလည်း မလိုတဲ့အတွက် သူ့အတွက် အထူးရွေးချယ်ပြီး အ၀တ်တွေ ၀တ်ရတာမျိုးတို့၊ သူကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ရွေးကြည့်ရတာမျိုးတော့ စတာတွေနဲ့ နပန်းလုံးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့" -Melissa Vladar
"ကျွန်မတို့ ချိန်းတွေ့တဲ့ အခါလည်း sex နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ pressure တွေ၊ လက်ပွန်းတတီး ရင်နှီးထွေးပွေ့ မှုတွေ စတာတွေကို ကြောက်စရာမလိုဘူးလေ။ အွန်လိုင်းမှာ အဲလိုကိစ္စ အရှုပ်အထွေးတွေ ဘာမှ မရှိပါ ဘူး။ " -Adena
" အွန်လိုင်းမှာ ချစ်ကြတာရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက် တစ်ချက်က ကျွန်မတို့ရဲ့ ရုပ်ရည်ရူပကာ ပယောဂကြောင့် မဟုတ်ပဲ ဒီလူကို ချစ်တာ၊ ဒီလူရဲ့ စိတ်ဓတ်ကို ချစ်တာ အဲဒါပါပဲရှင်" -S. Mazingo
"တစ်ကယ်လို့ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲကြမယ်ဆိုရင်တောင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှုတွေ (ဥပမာ..ပါးရိုက်တာ ဘာညာ) မျိုးတွေ မဖြစ်စေပဲ စကားလုံး သက်သက်နဲ့ ရပ်စဲလို့ရတယ်လေ။" -Yewande Fasoranti
"အွန်လိုင်း ဆက်ဆံရေးမှာ အားသာချက်တစ်ခု ရှိတာက လူတစ်ဘယ်လို ရုပ်ရည်ရူပကာ ရှိတယ်ဆိုတာတွေကို ထည့်တွက်စရာမလိုပဲ အဲဒီလူရဲ့ စိတ်နှလုံးနဲ့ စရိုက်ကို လေ့လာနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိလာတာပဲပေါ့။ စိတ်လှတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ချစ်ရတာဟာ ချစ်ခြင်းတွေထဲမှာ အလှပဆုံး ချစ်ခြင်းတရားပဲ မဟုတ်လား" -Debra Williams
"သူတို့တွေ ကိုယ့်အိမ်နားမှာ နေတာထက်ကို သူတို့အကြောင်း လေ့လာရတာ ပိုလွယ်တယ်ဗျ။ သူတို့တွေရဲ့ ကိစ္စအ၀၀တွေ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာတွေ ပြောဖို့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရတယ်ဗျ" –Manny
"Online relationship မှာ ကျွန်မတို့တွေဟာ နားထောင်မှု စွမ်းရည်နဲ့ စကားပြောစွမ်းရည်တွေ တိုးတက်လာ တယ်လေ" -Sandy
"သံယောဇဉ်တွေ တဖြည်းဖြည်းတိ်ုးလာတာ။ အွန်လိုင်းမှာ ဆိုရင် လက်တွေ့ပြဿနာတွေနဲ့လည်း ကင်းဝေးနေတယ် အဆင့်အတန်းတွေ ဘာတွေလည်းမရှိဘူး ပြောရတာလည်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်တော့ ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိတယ် ကိုယ်နဲ့ မကိုက်ရင်လည်း ရှောင်တိမ်းရလွယ်တယ်လေ"- Kaung Kin Ko
100th Post of My Blog
ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်လေး (www.cuttiepinkgold.info) ကို 2007 ခုနှစ် August လရဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ စတင်ရေး သားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်နေ့ရယ် လို့တော့ ကျွန်မသေချာ မှတ်မထားမိပါဘူး။ ပို့စ်စတင်တဲ့ရက်ကို ပြန်လိုက်ရင် ရပေမယ့်လို့ ကော်နက်ရှင် အခက်အခဲကြောင့် ကျွန်မလည်း ပြန်ရှာ မနေချင်တော့ဘူးရှင့်။ ထားပါတော့လေ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီအချိန်လေးက နေပြီး ကျွန်မဘလောဂ့်ရေး ဖြစ်ခဲ့တာ ခုဆိုရင်6လနီးပါးတောင် သက်တမ်းကြာရှည်နေပြီး ဒီပိုစ့်လေးဟာ ကျွန်မရဲ့ ပိုစ့် 100 မြောက်ရေးသား ချက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရလေး အနေနဲ့ ကျွန်မ ထူးထူးခြားခြားလေး ရေးပေးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မပဲ စိတ်ကူး စိတ်သန်း ညံ့ဖျင်းတာလားတော့ မသိဘူးရှင့် ဘာအကြောင်းကို ဘယ်လို သီကုံးရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မစဉ်းစားလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ပိုစ့်100 မြောက် အနေနဲ့တော့ ကျွန်မ တစ်ခုခုကို ကြိုးစားရေးပေးမှာပါ။
စစချင်း အနေနဲ့တော့ ဒီဘလောဂ့်လေးကို ရှင်သန်အောင် အသက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဟာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (အမ်.. မယ်ပင့်ဂိုလ်း.. တစ်မျိုးပါလား ဟိ)။ နောက်တော့ ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်ဖတ် ပရိတ်သတ်တွေ၊ ပုံမှန် အားပေးနေကျ ဘလောဂ့် လောကမှ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ သူတို့တွေသာ မဖတ်ရင် ကျွန်မ ဘယ်လောက်ရေးရေး ဒီဘလောဂ့်လေး အသက်ဝင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို နည်းပညာပိုင်းမှာ ကူညီပေးခဲ့ကြသော သူငယ်ချင်းများ၊ ဘလောဂ့်လောကမှ စီနီယာ များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလေးစား အားကျ အတုယူရတဲ့ ဘလောဂ့်များ ဖြစ်တဲ့ ကိုရန်အောင်၊ မလေးအိမ့်၊ ကိုညီလင်းဆက်၊ ကိုကောင်းကင်ကို၊ ကိုမင်းတစေ၊ မမမယ်လိုဒီ၊ ကိုနေဘုန်းလတ် စတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတွေကိုလည်း လေးစား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေရှင်။ ကျွန်မရဲ့ ဘလောဂ့်လေးကို ကျွန်မဂျီကျတိုင်း တစ်ခုခုပြောင်းလဲ လုပ်ချင်တိုင်းမှာ မညည်းမညူ ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြသော ကိုထိုက်၊ ကိုဇေယျာ၊ မိုးတိမ် စတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ MBS မှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှားပေးတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ.. စာရေးဖို့ အိုင်ဒီယာ မရတိုင်း ကျေးဇူးပဲ လိမ့်တင်နေတာ ခုတော့ အတွေးတစ်ခု ထွက်လာပြီရှင့်..
ကျွန်မဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Brand Executive တစ်ယောက် အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေတာပါ။ Brand Leader တစ်ယောက် ဖြစ်သည်နဲ့ လျော်ညီစွာ Staff Interview များကိုလည်း မကြာခဏ ဆိုသလို လုပ်ပေးရလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အင်တာဗျူးလုပ်တာကတော့ များသော အားဖြင့် Sales Staff ပိုစ့်တွေ အတွက်ပါ။ အဲတော့ ကျွန်မ အင်တာဗျူးလုပ်သမျှမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ရေးသားပါရစေနော်။
အင်တာဗျူး တစ်ခုထဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. လူတော်တော် များများ ဖြေကြတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို တစ်ခုထဲ အနေနဲ့ ရေးပေးလိုက်တာပါရှင်။
သမီး နာမည်ဘယ်လို ခေါ်လဲ
သမီးက ဘယ်ကနေ လာတာလဲ။ ကားစီးလာရတာကော အဆင်ပြေရဲ့လား သမီး။ ဘယ်မြို့နယ်က လာတာလဲဟင်
ဟုတ်၊ ပြေါပါတယ် မမ. မြောက်ဥက္ကလာ ကပါရှင့်
အိုကေပါ.. သမီးက ဒီအလုပ်ကို ဘယ်လိုသိပြီး လာလျှောက်တာလဲ
Opportunity Journal မှာကြော်ငြာတွေ့လို့ပါ အမ
ဟုတ်လား၊ သမီးက အရောင်းဝန်ထမ်း လာလျှောက်တယ် ဆိုတော့ ဒီအလုပ်ကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားမယ့် ပုံပဲနော်
ဟုတ် စိတ်ဝင်စားပါတယ် မမ၊ သမီး အရောင်း သမားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
သမီးရဲ့ ပညာအရည် အချင်းလေး ပြောပါအုံး
သမီး 10 တန်းကို ဆက်မဖြေတော့ပါဘူး အမ
ဘယ်လို ဘယ်လို၊ သမီးရယ် ဘာကြောင့်များ ဆက်မဖြေချင်တော့တာလဲ.. အခု အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ
သမီး 21 နှစ်ပါ အမ
ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာပဲ သမီးရယ် ဘာလို့များ ဆက်မဖြေချင်ရတာတုန်း ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ မခက်ခဲပါဘူး
ပညာရေးကို စိတ်မ၀င်စားတော့ လို့ပါအမ
အဲတော့.. ပညာရေးကို စိတ်မ၀င်စားဘူး ဆိုရင် သမီးဘ၀ကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မှာတုန်း
ကြီးလာရင်တော့ စီးပွားရေး တစ်ခုခုလုပ်မှာပေ့ါ အမရယ်.. အရောင်း အ၀ယ် ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ နေပါအုံး ဒီအလုပ်က 10 တန်းအောင်မှ ခန့်တာလား
ဘယ်အလုပ်ရယ် မဆိုပါ။ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီက ၀မ်ထန်းတစ်ယောက်ကို အလားအလာရှိတဲ့ တက်လမ်းရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ ဖြစ်စေချင်ကြတာပဲလေ
သမီးကတော့ စာကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး အမရဲ့
အမကတော့ သမီးကို ဆယ်တန်းအောင်အောင် ဖြေစချင်တယ်။ ပြီးတော့ ဘွဲ့တစ်ခုရအောင် ကြိုးစားစေချင်တယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ ဘွဲ့ရဖို့ အရမ်းခက်တယ်။ အမတို့ မြန်မာပြည်မှာ အဝေးသင်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကို 10 ရက်လောက် ကျောင်းတက်ရုံနဲ့ ဘွဲ့ရဖြစ်တယ်။ ဒီလောက် ပေါလောနေတာ သမီးရယ် မြန်မာပြည်မှာ နေမယ့်သူ တစ်ယောက်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့တစ်ခုလောက်တော့ ရထားသင့်တာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား
ဟုတ်.. အဲဒါတော့ အဲဒါပေါ့
ထားပါတော့လေ.. သမီးရဲ့ မိဘတွေကကော ဘာလုပ်ကြလဲ.. မောင်နှမရော ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲဟင်
အဖေကတော့ ကုန်သည် လုပ်ပါတယ် အမ။ အမေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ အိမ်မှာ နေပါတယ်။ အကိုတစ်ယောက်ကတော့ မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
သြော်.. သမီးကရော မလေးရှားတွေ ဘာတွေ ထွက်ဖို့ စိတ်မကူးဘူးလား..
လောလော ဆယ်တော့ မထွက်ဖြစ်သေးပါဘူး.. အဲမှာလုပ်တော့ ပင်ပန်းမှာပေါ့..
အဲတော့ အလုပ်လုပ်ရတာ သက်သာတယ် များထင်နေလားဟင်.. ဒီမှာလည်း အရောင်းသမား တစ်ယောက်ဟာ တစ်နေကုန် ကောင်တာမှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီးရောင်း၊ customer တွေကို အာပေါက်အောင် ပြောပြီးရောင်းရတာပဲလေ
အင် တစ်နေကုန်ကြီး မတ်တပ်ရပ်ရတာလား ထိုင်လို့ ရဘူးပေါ့ ဟုတ်လား
အမတို့မှာ စည်းကမ်းရှိတယ် သမီး. ဘယ်အရောင်း သမားကိုမှ ထိုင်ခွင့် မပေးဘူး.. သူဟာ အမြဲတမ်း sweet ဖြစ်နေရမယ်.. ကြည့်လိုက်ရင် Uniform ကလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိပြီး အမြဲ smart ဖြစ်နေရမယ်လေ.. ပြီးတော့ အမတို့ရဲ့ customer တွေက မြန်မာတွေချည်းပဲ မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း လာတော့ အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်း ပြောပြီးရောင်းရတယ်.. အဲတော့ အမတို့က ပညာအရည်အချင်း မပြည့်စုံတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ခန့်လို့ သင့်တော်ပါ့မလား သမီး လည်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေ။
သြော် .. ဒါကတော့ သင်ရင်တတ်ပါတယ်
သင်ရင်တော့ တတ်တာပေါ့။ ပြီးတော့ သမီးရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကြောင့် အမတို့က Promotion ပေးလိုက်ပြီပဲထား။ သမီးအောက်က ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အငယ်တွေက 10 တန်းတောင် မအောင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အထက်လူကြီးကို ဘယ်လောက်များ ရိုသေနိုင်မှာတဲ့လဲဟင်… ငယ်ပါသေးတယ် သမီးရယ် 10 တန်းလေးတော့ အောင်အောင် ဖြေလိုက်ပါနော်။
ဟီးဟီး… ( သူရယ်နေတာပါ)
ထားပါတော့လေ.. သမီး အားလပ်ချိန်တွေကို ဘယ်လို အသုံးချလဲ
စာဖတ်ပါတယ် အမ၊ ဗဟုသုတ ရစေမယ့် စာမျိုးတွေပေါ့
ဟုတ်လား တော်လိုက်တာ ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုး ဖတ်တာလဲဟင်
လွန်းထားတား တို့ မီကိုဇူးဇင်တို့ ရှင်မိုး တို့ရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို ဖတ်ပါတယ် အမ
အဲတော့.. သူတို့ ၀တ္ထုတွေ ဖတ်တော့ သမီး ဘာဗဟုသုတ တွေများ ရပါသလဲ
သူတို့တွေရေးတဲ့ မင်းသမီး မင်းသားတွေက မိုက်တယ် အမရဲ့.. တစ်ချို့ကျတော့လည်း ဆင်းရဲတယ် တစ်ချို့ကျတော့လည်း ချမ်းသာပြီး ကုန်တိုက်ကြီးတွေ ပိုင်ကြတယ်.. မင်းသမီးနဲ့ မင်းသား မာနတွေပြိုင်ကြတာ မိုက်တယ် အမ..
အမလေး အမလေးနော်.. နောက်ရော ဘာစာတွေ ဖတ်သေးလဲ
အိမ်က အမေကတော့ ဖတ်စရာ စာအုပ်တွေပေးပါတယ်.. ချစ်စံဝင်းဆိုလား ဘာဆိုလား မသိပါဘူး.. ပျင်းတယ် မဖတ်ချင်ဘူး…
သြော် ထားပါတော့လေ.. သမီးရဲ့ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ
ဘယ်လိုပြောရမလဲ.. လောလော ဆယ်တော့ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိသေးပါဘူး.. နောက်တော့မှ ပေါ့ .. အရောင်း အ၀ယ်တော့ လုပ်ချင်ပါတယ်.
ဟုတ်လား ဘယ်လို အရောင်း အ၀ယ်မျိုး လုပ်ချင်တာလဲ ဟင်
( လျှာရှည် မိတာ ကျွန်မ အပြစ်.. ကျွန်မ ဆက်ရှည်လိုက်ပါသေးတယ်)
အရောင်းအ၀ယ်က အမျိုးမျိူးရှိတယ်လေ.. စားသောက်ကုန်လား၊ ကားရောင်းမှာလား၊ အလှကုန်တွေလား
အင်း အလှကုန်တွေတော့ စိတ်ဝင်စားသား.. မသိသေးပါဘူး လုပ်တော့မှ ကြည့်လုပ်ရမှာပေါ့လေ
သြော် အရင်တုန်းကရော အလုပ်တွေဘာတွေ လုပ်ဖူးလား ဘာအတွေ့အကြုံတွေ ရှိလဲဟင်
ဟုတ် လုပ်ဖူးပါတယ် အမ.. အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာလည်း အထည်တွေ ညှပ်ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုမှာလည်း ၀ါယာကြိုးတွေ ဖြတ်ရ ပတ်ရတဲ့ အလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ်
အင်း..ပေါ့ သမီးရယ်. သမီးသာ 10 တန်းမအောင်ဘူးဆိုရင် သမီးရဲ့ ဘ၀က နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုအလုပ်တွေနဲပဲ စခန်းသွားနေမှာပါပဲ.. မြန်မာပြည်ထဲမှာ နေအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပညာကို ဆက်သင်စေချင်တယ်.. ဒါမှ အလုပ်ကောင်းကောင်း ရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား
အင်း သမီးရဲ့ မျှောမှန်း လစာကကော
35000- 40000 လောက်ဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ် အမ
အိုကေလေ အမတို့ ဖုန်းပြန်ဆက်ပေးမယ်နော်.. သမီးပြန်လို့ရပါပြီ
ဒီလို အဖြေတွေ ဖြေသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်မ အလုပ်ခန့်ဖို့ စိတ်မကူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ စကားတွေ ဆက်များနေမိတယ်.. အင်တာဗျူးနဲ့ မဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးနေမိတယ်။ ကျွန်မကတော့ သူတို့ကို အားပေးချင်တာပါ။ ပညာဆက်သင်စေချင်တာပါ။ တစ်ချို့တွေဆို ကိုယ်က စိတ်ဝင်စားပါလျက်နဲ့ မိဘဆင်းရဲလို့၊ ကျောင်းလခ မတတ်နိုင်လို့ ကျောင်းဆက်မတက်ရတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးတွေဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးလေးတွေ ပညာမသင်နိုင်ပဲ ၀မ်းစာရေး အတွက် လုံးပန်းနေရတာလည်း အများကြီးပါပဲ။ တစ်ချို့တွေကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကို စိတ်မ၀င်စားလို့ မိဘက အားပေးပါလျက်၊ ကျောင်းလခ တတ်နိုင်ပါလျက် လေနေတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ များသထက် များလာနေတဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လိုများ ရှိနေမှာပါလဲ။ တစ်ချို့တွေဆို ကျွန်မထက် အသက်ကြီးတယ် 25၊ 26 တောင် ဖြစ်နေပြီ။ ဘ၀ကို ပေါ့ပေါ့တွေးနေကြတုန်းပဲ။ အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေကို အင်တာဗျူးရတာ တော်တော်တော့ ကသီလင်တ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးချင်ဟန် ဆောင်ပြီး ခပ်တည်တည်ဗျူး ရတာပေါ့လေ။ ကျွန်မလည်း အရမ်းတော်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ရင်မောမိပါတယ်။
ကျွန်မ လမ်းမှာ အမှိုက်တွေ လိုက်ကောက်တဲ့ စည်ပင်သာယာက ၀န်ထမ်းတွေကို အားအား ယားယား မေးဖူးပါတယ်။ အန်တီတို့ တစ်ရက်ဘယ်လောက် ရလဲလို့။ တစ်ရက်ကို 1500 ရပါတယ်တဲ့။ အိမ်မှာလည်း ယောင်္ကျားနဲ့ ကလေးတွေ ရှိနေပါတယ်တဲ့။ တစ်နေ့ကို ယောင်္ကျားရော အန်တီပါ လုပ်လို့ 3000 လောက်ရမှ စားလောက်တယ် အမလေးရေတဲ့။ ကျွန်မတို့ Company တွေမှာ အောက်ခြေ၀န်ထမ်း တစ်ယောက်ရဲ့ လစာက 35000 ပါ။ သူသာ ဒီပိုက်ဆံကို တစ်ယောက်ထဲ သုံးမယ်လို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထမင်းဖိုး တောင် မလောက်ပါဘူးရှင်။ အ၀တ် အစားတွေ ၀ယ်ဝတ်ရဖို့ မဆိုထားနဲ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Company တစ်ခုမှ Resign Turnover တွေ အရမ်းများလာရတယ်။ သူဌေးကလည်း သူ့အတွက်ပဲ စဉ်းစားသလို၊ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်။ ဒီလိုပြောင်ရွှေ့မှုတွေ များနေတဲ့ Company တွေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အနာဂတ် ဘယ်လိုရှိမလဲ။
သေချာတာကတော့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာ လစာနည်းနည်းနဲ့ သူဌေးအတွက် များများ ပေးဆပ်ရတယ်။ သူဌေးတွေကတော့ လစာတိုးပေးဖို့ကို သေမလောက်စဉ်းစားကြပြီး ၀န်ထမ်းတွေဆီက အကျိုးအမြတ်တွေ ယူကြတယ်။ နေရာတိုင်းကို ကျွန်မ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီလို ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ Company တစ်ချို့နဲ့ ၀န်ထမ်း တစ်ချို့ကို သာ ဆိုလိုကြောင်းပါရှင်။
မြူတွေအုံးဆိုင်းနေတဲ့ ချစ်စရာ မြို့ကလေးက ကျွန်မရဲ့ မြင်ကွင်းမှာ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ ပျောက်ကွယ်လု နီးပြီ။ မနက်စောစော ချမ်းအေးလှတဲ့ ဒဏ်တွေရယ်၊ ခပ်ပြင်းပြင်း တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေစိမ်းတွေရယ်က ကျွန်မရင်ထဲက ခံစားချက်ကို ပိုမိုအောင် လှုံ့ဆော် ပေးနေတယ်။ ခွဲခွာခြင်းဆိုတဲ့ အသိတွေ၊ လွမ်းရတော့မယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေကြောင့် ဒီနှစ်ဆောင်းဟာ ကျွန်မအတွက် ပိုအေးတော့မှာပေါ့။ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခပ်မြန်မြန် ပြေးနေတဲ့ ကားကလေးက မြို့နဲ့ ဝေးရာဆီသို့ ကျွန်မကို အချိန်နဲ့အမျှ ခေါ်ဆောင်သွားနေတယ်။ ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေကတော့ ဘယ်လိုအတွေးတွေ ဘယ်လိုစိတ်ကူးတွေနဲ့ ကားပေါ်မှာ ငေးမောတွေးတော နေတယ် မသိဘူး။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့ သူ ရှိရာ မြို့ကလေးဆီကို မှန်းဆ လွမ်းမောရင် ခရီးဆက်လာ ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဟုတ်တယ်.. ကို ဆိုတာ ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့ သူ့ ကို ကျွန်မရင်ထဲက ခေါ်တဲ့ စကားလုံးလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မသူ့ကို တရားဝင် ခေါ်ခွင့်ရခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူးရှင့်။ ကျွန်မရင်ထဲက တိတ်တခိုးလေး စွဲလမ်းရတဲ့ သူ့ ကို တမ်းတမ်းတတနဲ့ ခေါ်တဲ့ နာမည်လေးပါ။ ကျွန်မလေ တစ်သက်မှာ ဒီတစ်ယောက်ထဲကိုပဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်မိတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အချစ်ကံခေလို့ပဲလား ကျွန်မရဲ့ သတ္တိမရှိမှု ကြောင့်ပဲလား.. သူ့ရဲ့ မ၀ံ့မရဲ နိုင်မှု ကြောင့်ပဲလား.. ကျွန်မချစ်တဲ့သူကို ကျွန်မ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ချစ်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ တိတ်တခိုးနဲ့ ဖွင့်မပြောရဲတဲ့ အချစ်တွေ၊ မျက်လုံးလေးနဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပြခဲ့ရတဲ့ အချစ်တွေ၊ သူလာရာလမ်း မှန်းဆငေးခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေဟာ ကျွန်မ အတွက်တော့ ဘယ်လိုမှ ဖျက်မရတဲ့ မှတ်တမ်းတွေပါ။
သူနဲ့ ကျွန်မ စတွေ့တဲ့ အချိန်ဟာ ဒီလိုဆောင်းရာသီရဲ့ မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ မနက်ခင်း တစ်ခုမှာပေါ့။ ၀တ္ထုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲကလို ခပ်ဆန်းဆန်းနဲ့ ဇတ်လမ်းဆန်ဆန် တွေ့ခဲ့ကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ မနက်ခင်းကို ကျွန်မ သတိရနေတယ်။ မနက်စောစော ထလမ်းလျှောက်ရင်း သူ့ကို ကျွန်မ အမှတ်မထင် လှမ်းတွေ့ခဲ့တာပါ။ မြူနှင်းတွေကြားမှာ သူပေါ်လာတာဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ လင်းလက်တဲ့ နတ်သား တစ်ပါးအလား ထင်မှတ်မှားစရာပါပဲ။ လမ်းလျှောက်နေရင်း ရှေ့ကနေ ဘွားခနဲ ပြေးထွက်လာတဲ့သူ့ကို မြင်ရချိန်မှာ ကျွန်မရင်တွေ တစ်ဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေခဲ့တယ်။ ဘုရားရေ.. မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးလားဟင်… နောက်တော့ သူ့ကိုတမ်းတတဲ့ စိတ်တွေ၊ ထိမ်းချုပ်မရအောင် တွေ့ချင်နေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အိပ်မရ ညပေါင်းများစွာကို ကျွန်မ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ အိပ်မက်တွေရဲ့ အခါခါ နှိပ်စက်မှု ဒဏ်တွေကို ကျွန်မ ခါးစည်း ခံခဲ့ရတယ်… "ကို" .. ကျွန်မကို နောက်တစ်ခါလောက်တော့ ဆုံခွင့်လေးပေးပါ ကို ရယ်….
မနက် မနက် လမ်းထလျှောက်မှာ ပျင်းတဲ့ ကျွန်မ ခုတော့ သူလာရာလမ်းကို မှန်းဆရင်း မြူတွေကြားမှာ တိုးဝှေ့နေတတ်ပြီ… စစတွေ့ချင်းလို မြူတွေကြားမှာ သူပေါ်လာလေမလား မျှော်လင့်ရင် မိနစ်တွေကို ရေတွက်တတ်လာ ခဲ့ပြီ.. အင်း ကံကြမ္မာရယ်.. ဘာကြောင့်များ ကျွန်မကို နှိပ်စက်ချင်ရတာတုန်း… ဒီလိုနဲ့ မတွေ့တဲ့ ရက်တွေများလာတော့ ကျွန်မပဲ လက်လျှော့လိုက်ရတော့ တာပေါ့.. အင်း.. အိမ်မှာပဲ စောင်ခြုံကွေးပြီး အတွေးနယ်ချဲ့တာ ကောင်းပါတယ်လေ….
"မမေပုလဲ ဆိုတာ ဒီအိမ်မှာ နေပါသလား ခင်ဗျာ" …
တစ်ရက် ကျွန်မ ရုံးသွားခါနီး အိမ်ရှေ့က အော်သံကြောင့် ဘယ်သူများ ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အိမ်ရှေ့ကို ထွက်လာခဲ့မိတယ်… အလို.. ဘုရားရေ.. ကျွန်မရင်ထဲက သူ.. ကျွန်မ သိပ်ချစ်မိနေတဲ့ သူ.. ကျွန်မ အမြင်များ မှားသလားလို့ မျက်လုံးကို သေချာ ပွတ်ပြီး ကြည့်လိုက်မိတယ်။ သေချာပါတယ် သူမှ သူအစစ်ပါ.
" မေပုလဲ ဆိုတာ ကျွန်မပါရှင့်.. ဘာကိစ္စများ ရှိပါသလဲဟင်"
" ဟုတ်ကဲ့ ညီမဆီကို လူကြုံရောက်လာလို့ လာပေးတာပါ ခင်ဗျာ"
" ရှင်.. အကိုက ဘယ်သူများ ပါလိမ့်ရှင်.. ဖေဖေတို့ ပေးလိုက်တဲ့ လူကြုံများလား"
" ကျွန်တော်က ဒေါ်မီမီရဲ့ တူပါ ခင်ဗျာ.. ပြန်ရောက်တာ တစ်ပတ်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်.. ဒါကြောင့် ညီမ မသိတာနေမှာပါ"
" သြော် အန်တီ မီမီ တူလား.. ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်"
အန်တီမီမီ ဆိုတာ ကျွန်မ မေမေရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း.. ဒီမြို့မှာ တာဝန်လာကျတဲ့ ကျွန်မကို စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ အန်တီပေါ့။ ကြည့်ပါအုံး သူတို့အိမ်ကို တစ်ပတ်လောက် မသွားပဲ နေချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ ရင်ခုန်သံလေးတွေ အဲမှာ ရောက်နေလိမ့်မယ် ဆိုတာ ကျွန်မ ထင်တောင် မထင်ထားမိပါလား… အဲ.. ဘုရားရေ ကျွန်မ သတိမထား မိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ မသိစိတ်က ညနေရုံးဆင်းရင် အန်တီတို့အိမ်ကို ၀င်ဖို့တောင် အစီအစဉ် ချပြီး ပါပကောလား.. ကောင်းရော !
နောက်တော့ သူနဲ့ ကျွန်မ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ခင်မင် ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ရင်ထဲမှာတော့ ဘယ်လိုနေမလဲ မသိဘူး။ ကျွန်မရဲ့ သံယောဇဉ်တွေကတော့ ထပ်ထပ်တိုးကာ သူနဲ့တွေ့လေတိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ မြန်နေတတ်တော့တာပေါ့။ တစ်ကယ်ပါ.. ယုံပါ ကို.. အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျွန်မ နှလုံးသားဟာ ကို့ကို တွေ့မှ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲပြီး နိုးထ လာခဲ့ရတာပါ။ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို လှိုင်းထအောင် လုပ်ခဲ့တာဟာလည်း ကိုလို့ ကျွန်မ တိတ်တခိုး ခေါ်ရတဲ့ ရှင်ပဲပေါ့လို့။ ကျွန်မလေ..ကို့ အကြောင်းတွေးရင်း ညပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်တတ်နေပြီ။ အိပ်မက်တွေကို ဇတ်လမ်းဆင်တတ်နေပြီ။ အသက်ရှုသံတွေကို ဘာသာပြန်တတ်နေပြီ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မ မလုပ်တတ်တာ တစ်ခုတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ အကြည့်တွေကို ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပာယ် ဖော်လို့ မရတာပဲပေါ့။
"ပုလဲ ဘာဖြစ်နေတုန်းကွ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းလည်း မရှိပါလား"
"မနက်က အိမ်က ဖုန်းလာလို့ အကိုရဲ့.. မေမေ နေမကောင်းဘူးတဲ့.. စိတ်အရမ်းပူတာပဲ"
"ဟုတ်လား..ဘာဖြစ်တာတဲ့လဲ.. သိပ်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ ကောင်းသွားမှာပါ"
"မေမေက နေမကောင်းဖြစ်ခဲတယ်.. ခု ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး.. စိတ်မပူပဲ နေလို့ ရမလား"
"သြော် ပူမနေနဲ့ကွ ညီမလေးရေ.. ပူတာ မကောင်းဘူး လူဦးရေတိုးတယ်.. ဒီလောက် ကုန်ဈေးနှုန်းတက်နေတာ လူဦးရေတိုးတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲကွ ဟားဟား"
"အာ လူဆိုးးးးး စိတ်ညစ်တာကို စစရာလား.."
ကျွန်မ စိတ်ညစ်နေချိန်တွေမှာ အဲလိုပျော်လာအောင်လည်း လုပ်ပေးတတ်သေးရဲ့။ သူ့ရဲ့ အပြောလေးတွေ၊ သူသုံးတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ သူကျွန်မကိုကြည့်တဲ့ ရီဝေေ၀ အကြည့်တွေအောက်မှာ ကျွန်မဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ကျဆုံးခဲ့ရတာပါ။ ကျွန်မအားငယ် နေချိန်တွေမှာ အမြဲအားပေးတယ်.. မေမေတို့ကို လွမ်းနေချိန်တွေမှာ စကားလုံးတွေနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးတယ်.. ကျွန်မပျော်နေချိန်တွေမှာ ကျွန်မနဲ့အတူ လိုက်ပျော်ပေးတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ ရူးမတတ်ပျော်ရွှင် ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ အထီးကျန် ဘ၀လေးထဲကို သူ့ကို ရောက်လာစေတဲ့ လောကပါလ နတ်မင်းကြီးများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါရဲ့။ သူနဲ့ဆုံအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ ကံကြမ္မာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူး မတင်မိတာ တစ်ခုက ကျွန်မ သူ့ အပေါ်မှာ ထားတဲ့ သဘောထားတွေကို နည်းနည်းလေးမှ ရိပ်မိအောင် လုပ်မပေးတာကိုပေါ့. ဒါမှ မဟုတ် တမင်များ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလေသလား ကို ရယ်.. ကျွန်မကို ရူးအောင်တော့ မလုပ်ရဘူးလေ နော်..
" အမ် ဘာဖြစ်နေတာလဲ ပုလဲရ ကြည့်လှ ချည်လား ဘာလဲ ဒီနေ့ ကျွန်တော် တော်တော် ချောနေလို့လား"
" ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး.. တစ်ချိန်ချိန်များ အကိုနဲ့ ဝေးသွားခဲ့ရင် ဆိုတာကို တွေးနေတာပါ"
" အဲ ဝေးရတာကတော့ လူတိုင်းပါပဲ ညီမလေးရယ်.. တွေ့နေချိန်မှာ ပျော်ပျော်နေပေါ့"
" ပုလဲလေ.. အကိုနဲ့ တစ်သက်လုံး ဒီလိုပဲ နေသွားချင်တယ် အကိုရယ်.. တစ်ခါ တစ်လေ အကိုနဲ့ ဝေးရမှာကို ကြောက်တယ်"
"ဟဲ့ ကောင်မလေး ဘာတွေ ပြောနေတာတုန်း အကိုက သေမှာ မို့လို့လား ကျန်းမာရေး ကောင်းပါသေးတယ်ကွ.. ဒီမှာ ပုလဲ အကို့ကို ပုလဲ ခင်တာ အကိုသိပါတယ်ကွ.. အကိုလည်း ပုလဲကို အရမ်းခင်ပါတယ်.. စိတ်ချ အကို့တစ်သက် ပုလဲကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးနော်."
ခင်တယ်တဲ့.. သူက ကျွန်မကို ခင်တယ်ဆိုပါလား။ ကျွန်မရဲ့ အကြည့်တွေကို မရိပ်မိဘူးလား ကို ရယ်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ပြောရခက်တဲ့ သဘောထားတွေကို နားမလည်ပေးနိုင် ဘူးလားဟင်။ ကျွန်မလေ အကို့ကို ခင်တာမဟုတ်ဘူး ချစ်တာ.. ရင်ထဲက မြတ်မြတ်နိုးနိုးကို ချစ်နေတာပါ… အစဉ်အလာတွေကြားမှာ နေနေရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်မပြောရဲတဲ့ အဖြစ်တွေ၊.. ခံစားချက်ကို မျက်လုံးနဲ့ သရုပ်ဖော်ရတဲ့ အခြေအနေတွေကို အကိုသိလျက်နဲ့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေရက်တယ်.. ဒါမှမဟုတ် သူ့မှာ ချစ်သူများ ရှိနေလို့လား.. ဘုရားရေ.. မဟုတ်ပါစေနဲ့.. သူချစ်တဲ့သူဟာ ကျွန်မပဲ ဖြစ်ပါစေ.. ကျွန်မလေ သူ့ကို တစ်သက်လုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပြုစုပါ့မယ်.. နားလည်ပေးပါ့မယ်.. အရှင်ဘုရား သူ့ကိုလေ ကျွန်မကို ချစ်လာအောင် အင်အားတွေ ပေးသနားတော် မူပါ မြတ်စွာ ဘုရားရယ်…
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို လူတိုင်းကြုံဖူး ကြမှာပါ။ ရှင်တို့တွေ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုကြပါသလဲ.. ကိုယ်ကချစ်သလောက် ကိုယ့်ကို ပြန်ချစ်တဲ့သူမျိုးနဲ့ ရော ရှင်တို့တွေ ကြုံဖူးကြပါသလား.. တစ်ဖက်သတ် အချစ်ကိုရော ရှင်တို့တွေ နားလည်ကြပါသလား… တစ်ကယ်တော့ ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ အချစ်တွေဟာ ဖော်ပြရခက်တဲ့ တစ်ဖက်သတ် အချစ်တွေပါ.. ကျွန်မလေ သူ့ကို ချစ်တဲ့အချိန်ကစပြီး သူ့ကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်ခဲ့တယ်.. သူ့အကြောင်းတွေးနေရရင် စိတ်ထဲက အလိုလိုပျော်တယ်.. သူတစ်ခုခုကို အလိုမကျမှာကို ကြိုတင်တွေးပူရင် သူ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် နေထိုင်ပေးခဲ့တယ်.. တိုက်ဆိုင်တဲ့ အချိန်တိုင်း သူ့ကို သတိရတတ်သလို မတိုက်ဆိုင်ပဲလဲ ကြံဖန် လွမ်းတတ်လာတယ်.. တစ်ကယ်တော့ ပြန်တွေးကြည့်ရင် ဒါတွေဟာ ကိုယ့်ဟာကို ရှာတဲ့ ဒုက္ခတွေပါ.. ဒါပေမယ့် ရှင်တို့သိကြလား ဒီဒုက္ခတွေက ချိုမြိန်တယ် ဆိုတာကိုလေ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ရင်ထဲမှာ ပူလောင်တာပေါ့… သြော် ရှင်တို့ကလည်းနော် မြတ်စွာဘုရား တောင်ဟောထား သေးတာပဲ 1500 ကိလေသာတဲ့.. ကိလေသာတွေက ပူတယ်လေ.. ပူထုဇဉ်မှန်ရင်တော့ ခံကြအုံးပေါ့ရှင်.. ပါးပါးလေးပါ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်!
"အကို ဒီဘ၀မှာ ဒီအတိုင်းပဲ နေတော့မှာလား ဟင်"
" ဟေ ဒီအတိုင်း မနေလို့ ကင်းမြီးကောက် ထောင်နေရမှာလား ကွ"
" ဟုတ်ဘူးလေ အကိုရဲ့ မိန်းမလေး ဘာလေး ယူဖို့ မစဉ်းစား တော့ဘူးလား.. ချစ်တဲ့သူရော မရှိဘူးလား ဟင်"
" ဟားဟား ငါ့ညီမလေးက သူ့အကိုကို အိမ်ထောင် ချပေးချင်တာကို.. တစ်ကယ်တော့ ပုလဲရယ် အိမ်ထောင်ဆိုတာ လွတ်လမ်း မရှိတဲ့ထောင်ပါ.. ကိုယ်ဒီထောင်ထဲတော့ မ၀င်ပါရစေနဲ့နော်"
" အင် အကို့အတိုင်းသာဆို အကို့ကို မွေးမိတဲ့ အကို့ အဖေနဲ့ အမေတော့ ဒုက္ခပဲနော်.. ဘာကြောင့်များ အဲလိုတွေးရတာပါလိမ့် အကိုကလဲ"
" အင်း စတာပါ ပုလဲရယ်.. အကိုတစ်ယောက်ထဲပဲ နေချင်တယ်.. တစ်ယောက်ထဲနေတာတောင် ဘ၀က ဒီလောက်ရှုပ်တာ.. နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆို ပိုရှုပ်တော့မှာပေါ့.. အကို ဒီအတိုင်းလေး အေးချမ်းနေပါတယ် ညီမလေးရယ်.. အကိုဝါသနာပါတဲ့ သစ်ပင်စိုက်တဲ့ အလုပ်ကို ခုလုပ်နေရပြီ.. ဒီမြို့လေးမှာ အေးအေးလေး နေ နေရပြီ.. အကို့အတွက် ဘာမှမလိုပါဘူး ညီမလေးရယ်"
" အင်း အကိုကလည်းနော် အသက်ကြီးတော့ အထီးကျန်လာမှာပေါ့ အကိုရယ်.. ဒါမှမဟုတ် အကို့မှာ အတိတ်ဆိုးတွေများ ရှိနေတာလားဟင်"
" တစ်ကယ်တော့ အထီးကျန်တယ်ဆိုတာ လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေပါ ညီမလေးရယ်.. ကိုယ်နေတတ်ရင် လောကဟာ ကျေနပ်စရာကြီးပါကွာ.. အတိတ်ဆိုးဆိုတာကရော ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ.. သူကဆိုးနေပေမယ့် ကိုယ်က နေတတ်ရင်.. ကိုယ့်အတွက်ဖြေသိမ့်တတ်ရင် ထင်သလောက် မဆိုးတော့ပါဘူး.. နောက်ပြီး ဒီတစ်သက် အကို့ကို ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးလည်း တွေ့တော့မယ် မထင်ပါဘူးကွာ"
" အင် အကိုကလည်း ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ.. အကို့နားမှာ အကိုမသိပေမယ့် ချစ်နေသူတွေ ရှိရင်ရှိမှာပေါ့.. နောက်တစ်ခါလောက် ပြန်မချစ်ကြည့်ချင် တော့ဘူးလားဟင် အကို"
" ဟားဟား ငါ့ညီမလေးက သူ့အကိုကို တော်တော် မိန်းမပေးစားချင်နေတာပဲ.. ညည်းလေးသာ ရှာ..ကြားလား"
" ရှာချင်တယ် အကိုရေ.. ဒါပေမယ့် သူက မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတော့ ခက်တယ်ရှင့်"
အွန့်.. သူ့အနားမှာ ဒီလောက်ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေး ရှိနေတာ မသိပဲတော့ နေမှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်.. ထားပါတော့လေ ကျွန်မထိုက်နဲ့ ကျွန်မကံပေါ့.. ဒီရေခဲတုံးကြီးကိုမှ ကျွန်မက ချစ်နေမိတာကို… အင်း ကိုရယ်. ကို့အနားမှာ နေခွင့်ရတာလေးကိုပဲ ကျေနပ်လှပါပြီ.. ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့်လေ.. ကံကြမ္မာက ကျွန်မကို ဒီအတိုင်း မထားဘူးရှင့်.. ကျွန်မကို ကိုနဲ့ဝေးရာကို ပို့မယ့် ကံကြမ္မာက ကျွန်မဆီ နောက်တစ်ခေါက် လာခဲ့ပြီလေ..
" သမီးရေ ပုလဲ.. သမီးတော့ ၀မ်းသာစရာပဲ.. သမီး မေမေလည်း တော်တော် ၀မ်းသာနေမှာ မဟုတ်ရင် တစ်ရက် တစ်ရက် သမီး အဆင်ပြေလား ဖုန်းဆက်မေးရတာ အမော"
" ဘာကြောင့်လဲ အန်တီရဲ့"
" သမီးတင်ထားတဲ့ ပြောင်းရွှေမိန့်လေ ရောက်လာပြီ သမီးရဲ့.. သမီးနေတဲ့မြို့ကို ပြောင်းရမယ့် Transfer Order ကျလာပြီလေ.. ဒီတော့ ပြောင်းဖို့သာ လုပ်ထားတော့ သမီးရေ..ညည်းပဲ ဒီမြို့မှာ ပျင်းတယ်ဆိုပြီး တင်ထားခဲ့ ပြီးတော့.. အန်တီတို့ကတော့ သမီးလို တော်တဲ့သူကို ဆုံးရှုံးရမှာ နှမြောတာပေါ့"
ကျွန်မရုံးက ကျွန်မရဲ့ အထက်လူကြီး လာပြောတော့ ကျွန်မ ၀မ်းသာရမှာလား ၀မ်းနည်းရမှာလားဟင်.. ကျွန်မဒီမြို့လေးကို ရောက်စတုန်းက ဒီနေရာလေးက ခေါင်လို့၊ ပျင်းစရာ ကောင်းလို့ဆိုပြီး ရောက်ပြီး သိပ်တောင် မကြာလိုက်ဘူး.. ပြောင်းရွှေ့ဖို့ လျှောက်လွှာ တင်ခဲ့တယ်.. ဟောခု ဒီနေရာလေးမှာလည်း ပျော်ရော.. ကျွန်မချစ်တဲ့သူကိုလည်း တွေ့ရော.. ကျွန်မကို သူနဲ့ဝေးရာကို ခေါ်ထုတ်ဖို့ ကံကြမ္မာက စေခိုင်းပြန်တယ်.. ကျွန်မ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. ဒီတစ်ခါ ထွက်သွားရရင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆုံဖို့ဆိုတာ တော်တော် မလွယ်တဲ့ ကိစ္စရှင့်။ မေမေတို့ကလည်း ဇွတ်.. ကျွန်မကို ဒီထိလာကြိုမယ် တဲ့လေ.. သူ့သူငယ်ချင်းကိုလည်း တွေ့ချင်ရှာမှာပေါ့… ကျွန်မကို ဒီနေရာလေးမှာပဲ ပြန်ထားပေးပါ ပြောရအောင်လည်း ဒါက ကလေးကစားပွဲ တစ်ခု မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဘုရားရေ… ကျွန်မ ဘာလုပ်ရမလဲ.. ကျွန်မကို အချစ်နဲ့ ဆုံဆည်းခွင့်ကို ဘယ်တော့မှ မပေးကြတော့ဘူးလား.. ကျွန်မကို ကယ်ကြပါ.. ကျွန်မလေ လွမ်းရမှာကို အရမ်းကြောက်နေမိလို့ပါ။
နောက်ရက် နည်းနည်းလောက်ကြာတော့ မေမေတို့ ရောက်လာကြတယ်.. ကျွန်မလည်း မတတ်သာတော့တဲ့ အဆုံး အပြောင်းအရွေ့ကိစ္စနဲ့ အလုပ်များနေရတယ်။ မပြန်ခင် တစ်ရက်မှာ အန်တီမီမီတို့က ကျွန်မရယ် မေမေရယ်ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်.. ဒါဟာ ကျွန်မနဲ့သူ နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးပါ။ ဒီလိုဝေးလံလှတဲ့ နေရာကို ကျွန်မအနေနဲ့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်နိုင်စရာ အကြောင်းရှိခဲလှသလို.. သစ်ပင်စိုက်ပြီး ဘ၀ကိုမြှပ်နှံချင်တဲ့ သူကြီးကရော ကျွန်ကို တစ်ကူးတစ်က လာတွေ့မယ်တဲ့လား… ကျွန်မ ရင်မောရပါတယ်.. အဲဒီနေ့က ကျွန်မနဲ့သူ စကားပြောဖြစ်ကြတယ်..
" ညီမလေး လမ်းမှာ ဂရုစိုက်သွားနော်"
" ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို.. ကျွန်မကတော့ အကို့ကို လွမ်းရတော့မှာပေါ့"
" ဟားဟား ဒီလို မပြောပါနဲ့ကွ ဟိုကိုရောက်တော့ မေ့သွားမယ့် သူကများနော်"
" မဟုတ်ဘူးအကို ကျွန်မလေ အကို့ကို တစ်သက်လုံး သတိရနေမှာ သိလား"
" အင်းပါ ပုလဲရယ်.. ကိုယ်လည်း သတိရနေမှာပါ"
" အကို ကျွန်မကို ပြောစရာ စကားလေးများ မရှိဘူးလားဟင်"
ကျွန်မလေ ဘယ်လိုမှ ထိမ်းချုပ်လို့ မရတော့ဘူး.. သူနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ မျက်ရည်ဝဲတက်လာတယ်.. ကျွန်မသူ့ကို စကားတွေ အများကြီး ပြောချင်နေတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ဘာလုပ်ရမလဲ.. ကျွန်မ ဘာမှ ပြောမထွက်ဘူ.. သူ့ဆီကလည်း တစ်ခုခုကြားချင်နေတယ်.. ကျွန်မလေ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြည့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သူ့ကို စိုက်ကြည့်နေမိတယ်.. ရှာလိုက်ပါကို..ကိုရှာတတ်ရင် ချစ်ရည်ရွှန်းလဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးအစုံကို တွေ့ရမှာပါ.. ကိုသာ နားလည်တတ်ရင်.. ကိုသာ လျစ်လျူမရှုတတ်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာ. .ခွဲခွာရချိန်ထိ ကျွန်မကို နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်အောင် လုပ်အုံးမလို့လားဟင်…! ကျွန်မ စိတ်ကျေနပ် စေတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းလောက်တော့ ကျွန်မကို နှစ်သိမ့်တဲ့ အနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပြောပေးပါကို.. ဟော ကိုပြောတော့မယ်.. သူဘာပြောမလဲ… ကျွန်မ ရင်တွေခုန်နေခဲ့တယ်…ပြောပါ.. ပြောလိုက်စမ်းပါ ကိုရယ်…
" ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ.. ဘုရား တရားလည်း မမေ့နဲ့ပေါ့ ပုလဲရယ် နော်" တဲ့.. သေပြီဆရာ..သေလိုက်တော့ မေပုလဲရေ…ဒီတစ်သက် နင်တော့ သူ့ကို မျှော်လင့်မနေနဲ့တော့..
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ.. ကျွန်မ ဘ၀မှာ ကျွန်မချစ်တဲ့သူကို တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နေရာလေးကို တော့ ကျွန်မ ဒီတစ်သက် မေ့တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးရှင်.. မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့တဲ့..ဗလာကျင်းနေတဲ့ ရင်ဘတ်အစုံနဲ့ ကျွန်မခွဲခွာခြင်းကို စတင်ရတော့မှာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မ တိတ်ကလေး ဆုတောင်း မိပါတယ်.. ကျွန်မကို ချစ်ပါလို့လဲ သူ့ကို မတောင်းဆိုချင်တော့ပါဘူး… ကျွန်မလည်း သူ့ကို မုန်းမေ့ဖို့ မကြိုးစား ချင်တော့ပါဘူး.. သူ့နှလုံးသားရဲ့ တစ်နေရာမှာ ကျွန်မကို ထည့်ထားပေးပါ ကိုရယ်.. မေပုလဲ ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို သတိရနေပေးပါ…။၊
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://rhythm-of-thoughts.myanmarbloggers.org/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.